Ra’iisal Wasaaraha Koonfur Soomaaliya Oo La Ansaxiyay « HiilDan.Com
Home › Warka (News) › Ra’iisal Wasaaraha Koonfur Soomaaliya Oo La Ansaxiyay
Ra’iisal Wasaaraha Koonfur Soomaaliya Oo La Ansaxiyay By hiildan on October 17, 2012	• ( 15 )
Share this:ShareFacebookTwitterGoogle +1PrintEmailLinkedInLike this:Like Loading...« Tacsi Ka Timid La Taliyaha Madaxweynaha Ee Dhaqaalaha.Macallin Cumar-Bidaar: Maamulka Cusub Ee Waxbarashada Gobolka Awdal »Categories: Warka (News)	Related Articles
Mr. Siilaanyo Thank You and Congratulations but Never Surrender Our Sovereignty	Beesha Habar Xuseen(B/Celi) Oo Marti Qaaday Ugaaska Beelaha Gadabuursi.	Hodan C/Raxmaan Dheere, Waa Fanaanad Qaran, Oo Ay Dhaleen Fannaaniin Qaran: Maxaa Ku Jaban Hadday Ka Qayb Gasho Xuska 18-ka May?	Todobaadkan Iyo Sheekadii Ugu Hadal Haynta Badnayd UK: Dr Siilaayo, Xirsi, Dr Maxamad vs Jaalliyada Awdal UK	Maanta Waa Maalin Khayr Badan: Soo Dhawoow Ugaas C/Rashiid	Professor Axmad Ismaaciil Samatar: CANARY IN THE COAL MINE (Somalia)	15 replies	»
Wali Ashma.	October 17, 2012 • 19:58	Waan u habalyaynayaa R’wasaaraha cusub.
Tima Cade hayska xaadiriyo Xamar oo ha doonto Wasiir.
Meesha waxbaa lakala iibsanayaaye Somalinimo ma taalo.Samaroon ha bartaan wax kala iibsiga oo ha dhaafaan waxan ay ku sheekaynayaan.
Tima Cade isgee Xamar oo boobka ka qaybqaado,hadii kale halkaa fadhi oo ka sheekee Somali iyo wax aan meesha oolin.
Waxa socdaba lama socdaan Samaroone way ka dhacsanyihiin.
Ismaaciil Cumar waxbuu iibinayaa,waxna wuu iibsanayaa.Hawiye ayuu la xidhay iyo Reer galbeedka danaha ka le Somaliya.
Aqoonyahanadii Samaroon waxay noqdeen Ninkii tagay Magaalada ee garan waayay cid uu la hadlo,deedna yidhi”Magaalooy waligaaba isdhaafdhaaf aduunbaa marti laguu yahay”.
Siyaasada iyo waxa lakala iibsanayo Samaroon way ka dhacsanyihiin.Dhukoodiina waaba iib oo waxa laka iibsanaya dad la fahay Reer galbeedka iyo siday wax u rabaan.
Waxaan leehay la jaanqaada waxtiga oo ka baxa waxa loogu yeedho,”aaminsanaanta fikir jirijiray,oo maanta laga gudbay”.
Reply ↓	Timacade	October 18, 2012 • 01:32	Aniga runtii ma awoodi karo inaan wasiir ka noqdo somalia, duruufo shaqsi ahaana awgeed, lakiin iyadoo aanay kaftan iyo faan midna ahayn aniga wasiir hada ka hor iyo hadaba waa la i weydiiyey inaan noqon karo. Hore waan u diiday, hadana weli duruufahayga shaqsi isma xaliyin, therefore, ma hubo inaan raadsan karo. Saxiib anigu gadabursigii aad taqaanay maahi, afarta, kitaaba waan ka jawaabaa, waxaan doonana waa ka noqon karaa somalia, lakiin, somalia diyaar uma aha dad noocayga ah.
Lakiin waxan ku talo jira inaan siyaabo kale u caawino dawlada cusub inta ay lugaheeda isu taagayso, waanan la sameeyey xidhiidh toos ah already. Somalia waxan waxan ka helay waxbarasho bilaash ah iyo nabadgalyo aan caadi ahayn markii aan yaraa. The least i can do waxa weeyo inaan investmentkii la i galiyey dib u celiyo. Insha allahna way suuroobi doontaa….
Reply ↓	Timacade	October 18, 2012 • 01:39	Wali Asma……surprise weyn oo gadabusiga siyaasadiisa ku saabsan ayaad dhawaan kasoo yeedhi doona north america, may be wiigan soo socda. Waxana la maqli doonaa hadalo aan gadabusi hore looga maqli jirin……dhiig kar.com, kuwii somalidiidka ahaa……kkkkkkkk
Reply ↓	ahmed	October 18, 2012 • 01:40	Timacade,
Khalad bay ahayd waxbarasha bilasha ah inaad hesho, aabahaa inuu ku shaqeeya bay ahayd, ama adigu aad shaqaysato ood dhabarka ka jabto. Mushkiladaba waxaa keentay waxbarshadaa bilaashka ah. ,
Reply ↓	Timacade	October 18, 2012 • 01:51	Maxaa dhacay ahmed xageed iga daartay….kkkk. Abaahay weligii day off ma qaadan intuu nolaa. Good tax paying citizen buu ahaa.
Reply ↓	ahmed	October 18, 2012 • 01:52	Timo Cade,
Taloow ma shirkii markaan maqlay baa ee la magac baxay, ” Awwww Axmed”, , Mida kale, ilayn bakhaylnimada koofi ma cabtaane, yaa idinka bixinayaa lacagta Hoolka shirka? Raali ahoow, Waxaa lagaa yaabaa Khaatumoo idinku caawinaysaa.. .
Reply ↓	Timacade	October 18, 2012 • 01:59	Ahmed,
KkkkkkkkkkSaxiib gadbursiga waa smart, lakiin waa sida democratic party ga maraykanka oo kale oo way adagtahay inay wax ku heshiiyaan, lakiin hadda culays siyaasadeed oo aad u weyn baa kusoo kordhay, waxanad arki doonta cusub.
Reply ↓	Marunbaa	October 18, 2012 • 04:39	Timacade, walaahi Gadabuursi asal ah baad tahay. Somaliya waxbaa laygu soo baray, dadkaa is jeclaan jiray, qaran la yaqaanaan ahaan jirnay iyo wixii la mida. Waxa kale oo aad laguugu maran habaabiyaa, Waar waa ragii wadanigii, waa ragii wax bartay, dad iyakaa ugu horeeya, ala maxay daarood iyo walawayn warkiina fahmeen. Wake up Timacade, ninka raga ahi cad quudheed ma qaato somaliyana wax dan ah oo kuugu jirtaa ma jirto. You came from far west where no one gives a hook and your voice is basically none existence.
Reply ↓	Timacade	October 18, 2012 • 12:31	Marunbaa…….kkkkkkk Seriously, maahi Gadabursigii calnka la hor qaadayey ee daba ordayey. Marunbaa saxiib walaahi siyaasada aan anigu ku jiraa ” Metrics” bay leeday wayna jihaysantahay, mana aha waali Somaliyey Toosoo, toosoo isku tiirsada ee…..Waana very effective, dadka ina jaarka ahina way ogyahiin, lakiin gadabursigu badankiisu ma fahansana.
Somalia Siyaasadeedii Hadda isbedel weynbaa ku dhacay just for the last three months. Imisa qof oo gadabursi ah ayaa really fahsan baad umalaynaysaa isbedelka dhacay. Dee anigu waxan ku jiraa inta yar ee fahamsan , waayo kuma dhega barjoobin borobogaandaha, Beelaha Dhinacyada. Saxiib siyaasada Somalweyn ee aan aaminsanahay maaha mid idha la’ ee way Awdalysantahay……kkkkkkk. Anigu siyaasada Somalia turjumaan uga baahni cid kale. Anigu reer Awdalna waan ahay, reer Somaliland na waan ahay, lakiin siyaasadayda anigaa u madax banaan.
Reply ↓	kuluc	October 18, 2012 • 12:43	marunbaa
waad asiibtay, gadabuursigu waa iska masaakiin amaanta faraha badanbay ka helaan iyo xoogaaga tacliinta ah ee wanlawayntu ku xumato kkkkkkkk imika ninka samatar waxa uga talaabsaday yarka yuusuf garaad oo ammaan kala daalay markaasay gaaladiina ku dayatay. aakhirkiina bulaacadii uu sheegi jiray intuu dhexfadhiistuu oo jacayl iyo bilaashbaan ku shaqaynayaa ka sheekeeyey hadana loo arxami waa, maanta waxa xamarjooga kii qurbameer state qoobkaciyaarka u qaabilsanaa kolay wasiirbuu u doontay kabahayga wax iigu rida haduu ka helo.
18 wasiirbaa la magacaabayaa kolay illeen dawlada somalia choice malaha oo mushaharka wasiirada shacabku ma bixiyaan ee gaalaa bixisee, 18kaas hal xabo xitaa gadabuursi laga siin maayo haday helaana waa yaab iyo lama filaan. gadabuursi xaq iyo xuquuq toona xamar kuma laha idinka iyo dameeraha abgaal ee suuqyada maraya isku sibaa loo arkayaa (excuse my french) . beryihii hore ee dadku carabaha u dhoofi jiray ayaa nin tuulo LAALEYS la yidhaahdo kasoo jeedaa baabuur lasoo degay markaasuu xaga danbe kaga buufiyey LIBAAXA LAALEYS, mid mindhaa laaleys si fiican u kala yaqaan ayaa beentiisa ka yaabay markaasuu yidhi ”LAABTUUNBAAD KA JECLAATEY LAYAANKEE LIBAAXBA MA JOOGO LAALEYS” intiina halkan somaliweyn iyo waxaas kaga sheekaysa ee koonfurta u buka waxaan kaga tegayaa
”laabtuunbaad ka jeclaateen somaliweyne somaliyiba ma taqaano samaroon”
Reply ↓	Timacade	October 18, 2012 • 12:49	Kuluc,
Somaliland iyo Somalia waa Apple and Oranges. Somalia waa Wadan la aqoonsanyahay, somaliland waa gobol somalia ka mid ah, inta aan anigu ogahay, aduunkuna ogyahay, markaa ” frame of reference” keenu isku midba maaha, dee sideen isku fahmaynaa…..
Markaa waxad gadabursiga ugu baaqaysaa inayna gobol somalia ka mid wax ka raadsadan, how pathetic!
Reply ↓	Timacade	October 18, 2012 • 12:50	Ku socota qof gaara:
Waan jeclaystay Amore!!!!!!!!!!!!!
Reply ↓	kuluc	October 18, 2012 • 13:28	timacade
adaaba horta sidaan rabay si kasii fiican u qeeaxay apple iyo orange waa different kkkkkkk shaqo iskuma laha isku sina ma dhadhamaan, sidaa si lamida awdal iyo xamar laga soo bilaabo 18/05/1991 isku dal maaha wax badanbaana is bedelay wixii dhacay hadaadan lasocon TIMELINE kan hoo.
1991 awdal waxa gacanta ku dhigay SNM (somali northern movemen) baro magaca dhabta ahaa ee SNM kkkkkkk.
1991 bishii may waxay beelaha somaliland isugu yimaadeen xarunta halgamayaasha dalka ee burco bartaas oo dadkii iska daaye dugaagii xitaa taageeray in qaranimada somaliland dib loola soo noqdo cidi kama aamusin cidna may diidin. waxaan la qaatay calan dhexda goobo cad ku leh oo shacaadu ku taal.
1993 kadib dagaal iyo isqabqasi snm dhexdooda ah waxa shir kale agu qabtay borama si loo sii adkeeyo jiritaanka qaranimada somaliland loona dhiso dawlad cusub.
1997 waxa hadana mar labaad dib loogu noqday marjaca qaramnimada somaliland ee borama kadib dagaal aad u qadhaadh oo beesha dhexe laba u kala baxday kuwo dawlada taabcasan iyo qaar kasoo horjeeda, marlabaad borama waxa lagu soo disay dawlad cusub cigaal iyo rayaale hogaan ka yihiin waxa borama lagu bedelay calankii hore ee somaliland waxaanu lagu bedelayn CALAN AAN DEGAYN iyo nathional anthem uu curuiyey abwaanka weyn ee reer borama xasan sheekh muumin.
2003 waxa la doortay madaxweynihii ugu horeeyey dhulka somalida si dimuquraadi ah loo doorto waxuuna noqday madaxweynaha jamhuuriyada somaliland mudane daahir riyaale kahin oo reer borama ahaa, after that election somaliland way kortay oo kashbacday markaasay kaban wan yeelatay mana jirto cid ilaa iyo hada tunka qaban karta somaliland ilaahay mooyaane noth even america.
Reply ↓	timacade	October 18, 2012 • 14:34	Kuluc,
Saxiib anigu isaaq iyo snm tartan kulama jiro umana haysto inay cadaw igu yihiin. Waa uun dad aan meel kasoo wada jeedno oo iyaguba dulman. Anigu dulmiga siyaasadeed ee Somalia ka jira inaan wax ka bedeli Karo Ayaan qabaa. Adiga iyo inta Somaliland kula rumaysanina sidii ilma yar oo cadhooday ayaad koona joogsateen ood khiyaali isku maaweelinaysaan.
Reply ↓	timacade	October 18, 2012 • 14:42	Kuluc……IOG……soddon sano ayuu dawlad sheeganayeyha haddana waakaa maanta xaabxabkii Somalia dhaafi la ee xitaa ciisihii uu dadka kukhuukhin jiray kasoo horjeesteen. Taariikhda aad raadinaysaa waa taa ee aad u ooyaysaan, waa 99% unemployment, prepetual poverty and clan chavanism. No thank you.
Blog Stats	1,205,048 Booqasho - (Mahadsanid Mar Kale Nasoo Bariidi.!)